မိတ်ဆက်ခြင်းနှင့်တောင်းပန်ခြင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » မိတ်ဆက်ခြင်းနှင့်တောင်းပန်ခြင်း
Posted by 007James on Aug 2, 2011 in Creative Writing, My Dear Diary | 25 comments
ကျွန်တော် 007 ဧ။် ပထမဆုံးသော postဖြစ်ပြီး လိုအပ်ချက်များရှိပါက အကြံဥာဏ်ပေးကြပါရန်နှင့် လွန်ခဲ့သော (၁၅)နှစ်က အဖြစ်အပျက်လေးအတွက် ဒီနေရာမှ တောင်းပန်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
၁၉၉၅ ခုနှစ်က ကျွန်တော့အမေ နှလုံးရောဂါနဲ့ ရန်ကုန်မှာဆေးရုံတက်ပါတယ်။ကျွန်တော်(၁၀)တန်းပေါ့။ မိတ္ထီလာကနေ ရန်ကုန်ကို အဖေနဲ့ကျွန်တော် ခဏခဏ သွားရတယ်။ စာမေးပွဲဖြေကာနီး တခေါက်အပြန်မှာဖြစ်တာပါ။အဲဒိနေ့က ရန်ကုန်ကနေ ည(၇)နာရီရထားနဲ့မိတ္ထီလာကို အပြန်မှာပါ။ ခုံက ရိုးရိုးတန်း အိမ်သာနားကပ်ရက်ခုံ။ တံခါးကလဲ အသံတအားမြည်နေတာ။ အနံကလဲဆိုးပေါ့။ ပဲခူးကို ည(၉း၃၀)လောက်ရောက်ပြီးပြန်အထွက်မှာ ကျွန်တော်က အိမ်သာတံခါးကို ထပိတ်ထားလိုက်တယ်။ အထဲလူရှိမရှိ မကြည်မိဘူး။ လမ်းတလျောက် အိမ်သာတက်တဲ့လူတစ်ယောက်မှ မရှိဘူး။ တံခါးကလဲ တဂျုံးဂျုံးမြည်လို့ပေါ့။ ည(၁၂)နာရီလောက် တောင်ငူဘူတာမှာ ရထားခဏ ရပ်တော့လဲ အသံကမြည်တုံးပဲ။ တောင်ငူဘူတာကနေ ရထားထွက်ပြီး ခဏနေတော့ အဖွားကြီးတယောက် အီမ်သာထတက်တာမှာ ပြသနာစတာပါ။
အထဲကနေ အသက်(၃၅)လောက်ရှိမယ့် လူတယောက်ထွက်လာပြီး “ဘယ်မ-=-=-=-=-======လဲကွ၊ အိမ်သာတံခါးပိတ်ထားတာ”– ဆိုပြီး ဆဲနေတာ အကြာကြီး။ ပြီးတော့ တွဲစောင့်ဆီသွားပြီး ဂုတ်ဆွဲလာပြီး ရစ်တော့တာပဲ။ ရအောင်ဖေါ်ပေး မပေးရင် မင်းကိုသတ်မယ်ဆိုပြီးပြောတာ။
မျက်နှာကတအားစိတ်ဆိုးနေတာ။ အဖေက မင်းပိတ်တာလားတဲ့။ မပြောရဲဘူး။ အထိုးခံရမှာကြောက်လို့။ စဉ်းစားကြည့်လေ ပဲခူးကနေ တောင်ငူထိ အိမ်သာထဲမှာ ဘယ်လောက် ဒုက္ခရောက်မလဲ။ အဲဒိအဖြစ်အပျက်လေက ခုချိန်ထိ ရင်ထဲမှာကျန်နေတုံးပဲ။မိတ်ဆွေသစ်များနဲ့ တွေ့ရင် အမြဲတမ်းပြောဖြစ်ပါတယ်။အိမ်သာထဲက လူနဲ့များ ဆက်စပ်နေမလားလို့ပါ။ ရွာသားများ ထဲကနေဆက်စပ်နေရင်လဲ တောင်းပန်လိုပါတယ်။
သိများသိကြရင် ပြောပေးကြပါ တောင်းပန်ပါတယ်လို့။
အမှားပါရင် သီးခံဖတ်ပေးသူများအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်လျှက်။
007James 007James has written 1 post in this Website..
View all posts by 007James →
နှစ်ပေါင်းများစွာ ရင်ထဲမှာ တိတ်တဆိတ် သိမ်းထားပြီး စိတ်မကောင်း ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကိစ္စ ဆိုတော့ အခုလို ဖွင့်ချလိုက်တော့ ၀န်တခု ပေါ့သွားသလို ဖြစ်သွားတာပေါ့။
အကောင်းဆုံးကတော့ မမှတ်မိတော့တဲ့ တံခါးပိတ်မိခံထားရတဲ့ လူကို ညည ဘုရားရှိခိုးတိုင်း ကျန်းမာပါစေ ချမ်းသာပါစေ ဆိုပြီး စိတ်နဲ့ မှန်းပြီးသာ မေတ္တာပို့ပေးလိုက်ပါလား.. သူ့ အပေါ်မှာ တင်နေတဲ့ အကြွေးတခု အခု ပေါ့တာထက် ပိုပြီး ပေါ့သွားမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
စမ်းကြည့်လိုက်ပါ တကယ် အစွမ်းထက် ထိရောက်ပါလိမ့်မယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာ မဟုတ်ရင်တော့ ဆောတီးပါနော်။
ကောင်းပါတယ်။ ကိုယ့်အမှားဆိုတာကို သိလို့ ၀န်ခံခြင်းဟာ မင်္ဂလာတစ်ပါးပါပဲ။ ကိုယ်တကယ်မသိလို့ တံခါးပိတ်လိုက်တာလေ။ သိသိကြီးနဲ့ လုပ်ထားတာမှမဟုတ်တာ ။ ဒါမျိုးတွေကဖြစ်တတ်ပါတယ် ။ အခုလိုရေးချပြလိုက်ရတော့လည်း စိတ်ထဲမှာပေါ့သွားတာပေါ့။ အဲဒီလူကိုပြန်တွေ့လို့ ပြောပြရင် အဲဒီလူကခွင့်လွှတ်မှာပါ။
မပန်းနု ရေ….ခွင့်မလွှတ်ရင် လဲ မတတ်နိုင်ဘူးပေါ့
လုပ်တုန်းက လုပ်မိပြီပဲ…အလှည့်ကျ မနွဲ့စတမ်းပါ…ဟုတ်ပီလား..
အမှန်ကတော့.. အထိုးခံရခံရ.. ချက်ခြင်းတောင်းပန်ရမှာပဲ..။
၁၅ နှစ်နေမှတောင်းပန်လည်း ရပါသေးတယ်..။
အနည်းဆုံးတော့.. ၁၅နှစ်လုံးလုံး စိတ်ထဲစူးနေတဲ့ ညှောင့်ကို အတိုင်းအတာတခုတော့နှုတ်လိုက်နိုင်ပြီပေါ့…။
အော် ဘယ်သူများလဲလို့ လက်စသတ်တော့မင်းကိုး။
အိမ်သာထဲမှာ နံစော် ပိတ်လှောင်ပြီး 5နာရီလောက်ပစ်ထားခဲ့တာကို
ငါ အခုထက်ထိ မမေ့သေးဘူးကွ။
15နှစ်လောက်ကြာမှာ အစဖော်ပြီး ခုမှတောင်းပန်တာ လုံးဝ (လုံးဝ) ခွင့်မလွှတ်ဘူး။ ခုနေအပြင်မှာ တွေ့လို့ကတော့ကွာ…………….
မပေါ.နဲ.နော် ဒီအမှုကရဲ တိုင်လို.ရတဲ.အမှု
တောင်းပန်တဲ့ သူက တောင်းပန်နေတော့လဲ
ခွေးလွှတ် အဲ …….. ခွင့်လွှတ်ပေးရတာပေါ့လေ
အိမ်သာထဲအပိတ်ခံရတဲ့လူထက် ကိုယ်တိုင်က ကိုယ့်အပြစ်က ပိတ်လှောင်တာကို ၁၅နှစ်ခံခဲ့ရတာပဲနော်
ဗုဒ္ဓပြောတဲ့ ၀ဋ်ဆိုတာ အဲဒါပဲလို့.. ထင်မိတယ်..။
တခြားကိုးကွယ်ရာဘာသာကြိးတွေက..Confession လုပ်ပြီး ဖြေလို့ရတယ်..။
အမှတ်တမဲ့ ကနေ အမှတ်တရလေးဖြစ်သွားတာပေါ့နော့။ဘယ်လို ဘဲဖြစ်ပါ စေ မိမိ အမှားကိုသိတဲ့ လူတိုင်း အချိန်မနှောင်းခင်ဝန်ချတောင်းပန်သင့်ပါတယ်။သိသိကြီးနဲ့ဆက်မိုက်နေကြမယ့်အစား. တောင်းပန်ဦးချမယ်ဆိုရင် ခွင့်လွှတ်ကြစမြဲပါ။လူမိုက်အားပေးလုပ်နေကြတဲ့ သူများကို လဲဒီနေ ရာကနေဆက်မလုပ်ကြဖို့ တောင်းဆိုလိုပါတယ်။ဘယ်သူမှာသေချာတယ် ပိုင်တယ်ဆိုတာမရှိပါဘူး။မမြဲတဲ့တရားဆိုတာထက်သေချာတာမရှိပါဘူး။
ဘယ်နှနှစ်ပဲကြာကြာ တောင်းပန်တယ်ဆိုထဲက တစ်ဖက်လူက နားလည်ခွင့်လွှတ်မှုနဲ့ ကျေအေးပေးမှာပါ။ တောင်းပန်ပြီးပြီလို့မှ တစ်ဖက်လူက နားလည်မှုမရှိ ခွင့်မလွှတ်ဘူးဆိုရင်တော့ ဒီလူဟာ ဘယ်လိုလူလဲဆိုတာ စဉ်းစားစရာတော့ပေါ်လာပြီ။ စိတ်ဓာတ်ပြည့်ဝသူများသည် ဘယ်ချိန်ပဲ မှားမှန်းသိလို့ တောင်းပန် တောင်းပန် ခွင့်လွှတ်တတ်စမြဲပါပဲ….
တောင်းပန်တောခွင်လွတ်ရတာတာပေါ ခွင်လွတ်ပါတယ်ကွာ ငါကတောင်းပန်ရင်ကိုကျေနပ်ပါပြီ
အပစ်ပြုလိုက်တယ် တောင်းပန်မယ် ခံရတဲ့သူကကျေအေးတယ်
အပစ်ပြုသူက နောက်ထပ်တစ်ကြိမ် ဒီလိုအပစ်ကျရောက်စေမှုမျိုး ထပ်တစ်ခါ လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ကော
အမှားကို အမှန်အတိုင်းဝန်ခံတာကောင်းတဲ့အလုပ်ပါ.. ဒီလိုပါပဲဗျာ ကျွန်တော်တို့လည်းအမှားတွေရှိတယ် ၀န်ခံဖို့ဝန်လေးနေတာ အကိုက၀န်ခံတော့ ကျွန်တော်တို့တောင် အားကျသွားပီဗျာ.. ဂွဒ်ဂွဒ်
သူ ရေးတုန်းက တယောက်ထဲလို့ ထင်နေတာ .. အခုတော့ အူရှီးနေတဲ့လူ ငါးယောက်ပူးကြီး အိမ်သာထဲမှာ ဘာ ၀င်လုပ်နေကြတာတုန်း ..
ကိုပေါက်၊ အန်ကယ်ကြီး၊ true answer စုံစုံ မိုးပွင့်ဖြူ .. တညိုးကြီးပဲ
ရထားကြီးကဂျုံးဂျုံး နဲ.မြည်နေတာဆိုတော့ ပိတ်ထားတဲ့သူကမကြားလို.ပါကွယ်။ အထဲကလူကကံဆိုးစွာနဲ.
ဒီလိုပါပဲ ဖြစ်တတ်ပါတယ် … ။ ကိုယ် စိတ်ယုတ်မာထားပြီးလုပ်တာမှ မဟုတ်ပဲ … ။ အကျိုးကြောင်း တိုက်ဆိုင်လို့ ဖြစ်ရတာ အခုလို ဖွင့်ပြောပြီးတော့လည်း မေ့လိုက်ပါတော့ ။
ပြီးတာတွေလည်း ပြီးပါစေတော့… ဟိုလူကတောင် အခု သတိရချင်မှ ရတော့မှာ … ။
ဘာဖြစ်ဖြစ် အမှတ်တရတော့ ဖြစ်ခဲ့တယ်မို့လား .. .နောက်ပိုင်းသင်ခန်းစာရတာပေါ့လေ … ။ တစ်ခုခုကို လုပ်တော့မယ်ဆို သေချာအောင် ပြန်ကြည့်တတ်တဲ့အလေ့ကျင့်မျိုး ရတော့တာပါပဲ ။